Deni: “Wax u qalma bulshada Puntland ayaa ka soo baxaya heshiiska Dekadda Bosaso” Faallo • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Deni: “Wax u qalma bulshada Puntland ayaa ka soo baxaya heshiiska Dekadda Bosaso” Faallo
Deni: “Wax u qalma bulshada Puntland ayaa ka soo baxaya heshiiska Dekadda Bosaso” Faallo
April 16, 2019 - By: I. Haji Said
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni – Sawirka A. Shacban
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa habeenkii xalay khudbad u jeediyey jaaliyadda Soomaaliyeed ee Imaaraadka. Khudbadda Madaxweynaha waxaa lagu tilmaami karaa mid xanbaarsaneyd rajo gelin uu bulshada hoga tusaaleynayo rajada ay Puntland leedahay ee dhanka istaraatiijiyadda dhaqaale iyo midka siyaasadeed, iyo isbeddelka xukuumadiisu wado ee dhanka dhaqaalaha iyo dib u habeynta amniga.
Qodobada laga xusi karo khudbadda Madaxweynaha
Madaxweynuhu waxa uu caddeeyey siyaasadda Puntland ee dalka iyo ilaalinta mabaadi’dii ay u taagneyd oo ah.
B. Ilaalinta midnimada dalka
T. Xoojinta, dhiirigelinta iyo hormarinta nidaamka lagu heshiiyey ee federaalka
J. Siyaasadda Puntland ay tahay nabad iyo gorgortan khilaafkasta oo jira
x. Ilaalinta iyo sugidda amniga la dagaalanka kooxaha nabad diidka ah.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in ay isbeddel ku sameeyeen nidaamka maaliyadda ee Puntland oo hadda ay Puntland kala shaqeynayaan hay’ado caalami ah. Deni ayaa sheegay in Puntland maanta ay leedahay lacag keyd ah oo loo baahan karo xaalddaha degdeg ah, waxaana uu ku tilmaamey in ay tahay markii u horeysey muddooyinkan.
Maaxweynaha Dowladda Soomaaliyeed ee Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo horey u ahaa ganacsade si weyn looga yaqaaney Soomaaliya iyo Imaaraadkaba ayaa sheegay in mudadii uu joogey Imaaraadka kulamo miro dhal ah la qaatey xubno ka socdey dowladda Imaaraadka, ganacsatada shirkadaha waaweyn waxaana uu kala hadley xoojinta xiriirkii soo jireenka ahaa ee labada dhinac.
1.DEKADDA BOOSAASO IYO DPWORLD
Madaxweyne Deni ayaa sheegay in kulankii uu la qaatey madaxa shirkadda DPWorld ee laga kireeyey dekadda Boosaaso muddo 30 sano uu ku soo dhamaadey afgarad, waxaan ku heshiiney ayuu yiri in muddo sanad ah gudihiis lagu xaliyo caqabadaha jira, waxaan rajeyn in heshiis Puntland u cuntama in uu meeshaas ka soo bixi doono ayuu yiri Madaxweynuhu, hadalkan ayaa loo fasirety in dib loo furayo heshiiska lana saxayo wixii ka khaldamey.
Qodobada kale ee dhaqaalaha ee Imaraadka uu kala hadley Madaxweynuhu waxa kamid ahaa dhamaystirka garoonka diyaaradaha ee Boosaaso iyo hagaajintiisa dhanka amniga ee garoonka. In shirkadda duulimaadka ee FlyDubai ay bilowdo duulimaad caalami ah oo ay ku tagto Puntland, taas oo is afagard ku dhamaatey iyo arrinta u weyn ee ah in dib loo furo dhoofinta xoolaha Soomaaliyeed marka ay buuxiyaan shuruudaha laga doonayo.
2. DIB U BILAABIDDA MASHRUUCII GAROWE-GALKACYO CORRIDOR
Madaxweynaha Puntland ayaa shacabka ugu bishaareeyey in dib loo bilaabayo mashruucii weynaa ee hakadka la geliyey ee dhismaha waddada isku xirta Garoowe ilaa Gaalkacyo taas oo laf dhabar u ah dhaqaalaha gaar ahaan dhoofka xoolaha, mashruucan oo ay hadda la wareegeen Midowga Yurub ayaa xukuumaddii hore ee Puntland ku fashilantey.
3. SHIRKA MAALGASHIGA
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in bisha sideedaad ee sanadkan Puntland lagu qaban doono shirka maalgashiga iyo carwada bandhigga taas oo la doonayo in lagu soo jiito maalgashiyaasha.
Gebagebadii khudbadda Madaxweynaha ayaa la dhihi karaa waxay ahayd mid wanaagsan oo abuurtey jawi rajo iyo yididiilo, markala eego dhinacyada uu ka hadley.
Qore: ismaaciil Xaaji Siciid